Abenzi bezilwane & abahlinzeki - China Animal Factory
Ishibhile eshibhile esenziwe ngomsebenzi wezandla upholi wokudweba ikhithi isiphambano esithunyelwe ngo-15190
I-Factory Wholesale Parrot Picture Cross Stitch Iphrinta yokudweba Isiphambano. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Ukuhlobisa kwasekhaya umbala we-DIY embroidery animal animal pattern cross stitch kit ezenziwe ngezandla. 15098
Umbala wezilwane umhlobiso wasekhaya sebenzisa indwangu yezinto zokuthunga ubuciko bokusebenza umsebenzi wokuthunga isiphambano.
I-Handetade Cetacea pattern embroidery kit canvas fabric material diy cross stitch 15203
Igumbi lamanje lokuhlala lobuciko lobuciko besipho sokuhlobisa isethi yeCetacea cross stitch embroidery set. Igridi evumayo, imvelo engaphandle kwezithasiselo zamakhemikhali, akukho ndwangu efekethisiwe yokuhlobisa, okonga isikhathi eside, ukuphrinta okufekethisiwe akubizi amehlo, akunankinga, ukufekethiswa kungonga isikhathi. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Imikhiqizo eshisayo efekethisiwe yokuthungwa kwesikhonkwane odongeni lobuciko behhashi lokunqamula i-15202
I-Hot Sales Needlework Cross Stitch Handmade Craft Arts Horse Printed Cross Stitch Embroidery.
Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Izinga eliphakeme le-canvas elenziwe ngezandla elenziwe ngezandla lesilwane elenziwe ngezandla lesikhumba esiphakeme15201
Igumbi lokuhlala lwanamuhla lobuciko lobuciko besipho sokuhlobisa isethi yesilwane esiphambanweni sokumisa imifino. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Eshibhile wholesale yezandla yezandla ikati elihle lokudweba ikhithi isiphambano esithunyelwe ngo-15200
Isitayela esisha sobuciko odongeni esihlobisa ikati elihle eliphrintiwe. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu ye-DIY eyenziwe ngezandla ezimibalabala yenja cross stitch hand embroidery 15199
I-Hot Sales Needlework Cross Stitch Handmade Craft Arts Umbala Wenja Ephrintiwe Yesiphambano Esihlanganisiwe. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Isitayela esisha sobuciko odongeni lokuhlobisa isilwane esiphrintiwe esiphambanweni ngo-15197
Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu ye-DIY eyenziwe ngezandla isilwane esiphambanisiwe efekethisiwe yesandla. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
Ishibhile eshibhile eshibhile esenziwe ngezandla i-tiger painting kit cross cross 15196
Isitayela esisha sobuciko wall decor diy color cute tiger ephrintiwe isiphambano. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
I-Hot Sales Needlework Cross Stitch Handmade Craft Arts Animal Printed Cross Stitch Embroidery 15195
Isitayela esisha sobuciko odongeni oluhlobisa umbala we-diy isilwane esihle esiphrintiwe esiphambanweni. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.
I-Factory Diract-sale Home Decoration Kits Embroidery Fabric Indwangu Yesiphambano Yokwakha Ubuciko be-DIY Kits Embroidery Kits 15194
Ifektri wholesale yezandla zezandla zezandla zezandla zezintambo zokuthunga. Umbala okhanyayo kulula ukuhlukanisa, i-lattice iyisikwele ngaphandle kokuphambuka, futhi intambo yekhwalithi efekethisiwe ayipheli. Ikhwalithi ingamelana nokuhlolwa, ukuphishekela kwethu ikhwalithi ukukwenza weneliseke ngokwengeziwe. Le yi-DIY, imikhiqizo engaqediwe idinga ukwenziwa wedwa. Lo mkhiqizo awufiki nohlaka lwesithombe, uma kunesidingo sokuthenga ngokwehlukile.